मुसा, चिल र राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
मुसा, चिल र राजनीति
भुइँमा कुद्ने र लोकतन्त्रको जरा काट्ने मुसा प्रवृत्ति छोडौं, आकाशमा उड्ने र पर क्षितिजसम्म देख्ने चिल बनौं
असार ६, २०७४ केशव दाहाल
पञ्चतन्त्रमा एउटा रोचक कथा छ । मुसाको कथा । कथामा एक जना ऋषि थिए । ऋषिसँग साधारण कुटी र एउटा दानपात्र थियो । ऋषि दानपात्रलाई आफ्नो विश्रामकक्षसँगै झुन्ड्याउँथे । हरेक रात एउटा मुसो आउँथ्यो र उफ्रिएर दानपात्रमाथि चड्ने गर्दथ्यो ।
ऊ फुर्तीसाथ दानपात्र रित्याउँथ्यो र जान्थ्यो । मुसाको फुर्ती देखेर ऋषिलाई आश्चर्य लाग्यो । एक दिन ऋषिले आफ्ना शिष्यलाई बोलाए र मुसाको दुलो पत्ता लगाएर खन्न आदेश दिए । त्यसै गरियो । दुलो खन्दै जाँदा त्यसको अन्त्यमा यथेष्ट हीरा, मोती, जवाहरातसहितको गाडधन भेटियो । त्यसलाई निकालियो । जब गाडधन निकालियो, भोलिपल्टदेखि मुसो कसैगरी उफ्रिएर दानपात्रमा चढ्न सकेन । ऊ शक्तिहीन भयो । कथाले भन्छ— सम्पत्ति शक्ति र प्रेरणाको स्रोत हो ।
मुसाको कथालाई राजनीतिसँग जोड्दा निकै रोचक हुन्छ । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा मुसा प्रवृत्तिको खास अर्थ छ । हाम्रा केही नेताहरूको परिचय नै ‘मुसा प्रवृत्ति’ हो । अन्यथा २०४६ देखि ०७४ सम्मको नेपाली राजनीतिमा उनीहरू सदैव शक्तिशाली हुने थिएनन् । उनीहरू को हुन् भन्नु पर्दैन । प्रस्तुत कथा सन्दर्भबाट नेपाली राजनीतिको शक्ति र प्रेरणास्रोत खोज्न केही मूलभूत प्रश्नहरूमा प्रवेश गरौं । जस्तो नेपाली राजनीतिको शक्तिको गुह्य गाडधन के हो ? कुन यस्तो शास्त्र छ, जसले नेताहरूलाई लोकतन्त्रको जहाज दुलो पार्न सधैं उत्प्रेरित गरिरहन्छ ? अथवा हाम्रा पार्टीहरूको सत्ताकेन्द्रित र चालु प्रवृत्तिको प्रेरणा सूत्र के हो ?
मेरा एक मित्र छन् एमालेमा । उनी भन्छन्— एमालेको राजनीतिक प्रेरणा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो । त्यसो त औपचारिक बहसमा माओवादीहरू भन्छन्— माओवाद नेपाली क्रान्तिको अजेय शक्ति हो । कांग्रेसी मित्रहरू झन् के कम । उनीहरू भन्छन्— लोकतान्त्रिक समाजवाद नै नेपाली कांग्रेसको प्राणवायु हो । अरू पार्टीहरूका पनि आफ्नैखाले औपचारिक र सैद्धान्तिक प्रेरणा स्रोतहरू होलान्, जसलाई दलहरूले आफ्ना दस्तावेजहरूमा लेखेका छन् । इटहरीमा भेटिएका एक जना कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘यी सब दुनियालाई भन्ने कुरा मात्र हुन् । हाम्रा दलहरूको माक्र्सवाद, माओवाद र बीपी चिन्तनको जामा मुसाले खाइसक्यो । गुह्य कुरा अर्कै छ ।’
दुनियाले देखेको कुरा हो कि, हाम्रा पार्टीहरूको प्रेरणा स्रोत उनीहरूले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त होइन । ‘जबज’ जे हो, एमाले त्यस्तो छैन । ‘माओवाद’ जे हो, माओवादी त्यो रहेन । ‘बीपीले’ जे भने कांग्रेसले त्यसो गर्दैन । त्यसो भए के हो त नेपाली राजनीतिको नवीन प्रेरणास्रोत ? यसको पछिल्लो गुरु ‘बजारवाद’ हो ।
बजारवादकै प्रेरणा, तागत र सामथ्र्यले नेपाली राजनीतिको ढुंगा चलिरहेको छ । यहाँँ बजारवादको अर्थशास्त्रीय परिचर्चा गर्न खोजिएको होइन । बरु नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदो ‘उपयोगवादी’, ‘दलाल’ र ‘नाफाखोर’ चरित्रबारे उल्लेख गर्न खोजिएको हो, जुन ठ्याक्कै दलाल पुँजीवादको राजनीतिक संस्करणजस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो राजनीतिमा भूराजनीतिको जब्बर प्रभाव छ । जस्तो बजारमा ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको’ प्रभाव हुन्छ । यो सिन्डिकेटमा विश्वास गर्छ । यो नाफामुखी छ । यो सत्ता र सम्पत्तिमा आसक्त छ । मानवीय संवेदनालाई यसले वस्तु ठान्छ । यो उपयोगवादी छ । यो विज्ञापनमा विश्वास गर्छ । चामलमा कनिका मिसाएर बेच्नु यसको चरित्र हो । कुरा पक्का छ कि अर्थशास्त्रको बजारवाद पैसाको पछाडि लाग्छ । राजनीतिको बजारवाद सत्ताको पछाडि लाग्छ ।
जब बजारवाद राजनीतिको प्रेरणा बन्छ, तब के हुन्छ ? स्वभावत: यसले जनताको अधिकार, भावना र सार्वभौमिकताको मूल्य निर्धारण गर्छ । यसले राजनीतिका आदर्शहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दैन । किनभने बजारमा आदर्श बिक्री हुँदैन । जब राजनीतिको एक मात्र लक्ष्य सत्ता र सम्पत्ति बन्छ, बुझे हुन्छ— राजनीति राजनीति हुँदैन, व्यापार हुन्छ । यो निकै खतरनाक कुरा हो ।
बजारको अभिन्न अंग हो, उपयोगितावाद । उपयोगितावादका विषयमा प्रशंसा गर्ने र गाली गर्नेहरू दुवै पाइन्छन् । बेन्थम (१७४६–१८३२) र स्टुअर्ट मिल (१८०६–१८७३) जस्ता दार्शनिकहरू उपयोगितावादलाई सकारात्मक प्रयत्न मान्छन् । तर जब उपयोगितावाद उपयोगवादमा फेरिन्छ, राजनीतिमा गडबडी त्यहींबाट सुरु हुन्छ । आलोचकहरू मान्छन् कि उपयोगवादले सिद्धान्त, आस्था र मूल्यमान्यताहरूसँग सौदाबाजी गर्छ । उपयोगवाद कसैको मित्र हुँदैन । बस, उपयोगमा आउने हरेकलाई प्रयोग गर र फालिदेऊ । ‘युज एन्ड थ्रो’ यसको ‘मोटिभेसन’ हो । पुराना टीभीहरू फालेजस्तै । पुराना गाडीहरू कवाडीलाई बेचेजस्तै । थारो गाई पोस्नु हुँदैन भन्नु उपयोगवाद हो । थारो गाईलाई पनि संरक्षण गर्नु राजनीति हो । उपयोगवादीहरू घाटाको कामै गर्दैनन् । वस्तु र विवेकमा भेद गर्दैनन् । किनभने उपयोगवादीसँग मन हुँदैन । लौकिक सत्ता र स्वार्थका लागि हरेकलाई प्रयोग गर्नु उपयोगवाद हो ।
उपयोगवादको मुख्य दुर्गुण के भने, यसले राजनीतिलाई मानवीय पक्षहरूबाट अलग गर्छ । यसले राजनीतिलाई मुद्दाहरूबाट अलग गर्छ । यसले राजनीतिको कमलो पक्षलाई भत्काउँछ र निर्मम बनाउँछ । पछिल्लो समय पार्टीहरूले जनताका मुद्दाहरूलाई जसरी गिजोले, त्यो उपयोगवादकै निकृष्ट उदाहरण हो । नेताहरू कहिले मधेस समाउँछन्, कहिले पहाड, कहिले जनजाति, कहिले भाषा र पहिचान । विषयलाई समाउनु र छोड्नुको मुख्य लक्ष्य नै सत्ता र शक्ति हुन जान्छ । यस्तो राजनीति आफैंमा छेपारोजस्तो हुन्छ । फाइदाका लागि रंग फेरिरहने ।
कहिले कुनै पार्टीलाई वर्ग दुश्मन देख्ने, कहिले त्यही पार्टीसँग लगनगाँठो कस्ने । आफ्ना सनातनी सिद्धान्तलाई सत्ता स्वार्थका लागि भत्काउनु र स्वार्थ सकिएपछि पुन: समाउनु । कहिले कट्टर कम्युनिस्ट हुनु । कहिले नरम । र फेरि कट्टर कम्युनिस्ट हुनु । कहिले लेनिनको फोटो समाउनु, कहिले फ्याल्नु र फेरि समाउनु । कहिले छिमेकलाई रिझाउनु, कहिले राष्ट्रवादलाई भड्काउनु । यस्तो राजनीतिले आवश्यक पर्दा ‘चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुली’ दिन्छ । उपयोगवादी राजनीति व्यक्तिको योग्यता हैन उपयोगिता हेर्छ । यो क्षमता र सिर्जनशीलतामा विश्वास गर्दैन । नाफामा विश्वास गर्छ । पार्टी र व्यक्तिसँगको सम्बन्ध उसका लागि शक्तिआर्जनको साधनबाहेक केही हुँदैन । बस, सबैलाई उपयोग गर्‍यो, उपयोगिता जसको सकिन्छ, छोडिदियो । उपयोगवाद आत्मकेन्द्रित हुन्छ । यसका लागि सत्ताको न्यायो सबैभन्दा प्यारो लाग्छ ।
उपयोगवादले सिद्धान्तको नभई व्यवहारको प्रवद्र्धन गर्छ । भन्छ, ‘व्यावहारिक बन, छोड सिद्धान्तका कुरा ।’ राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन भन्ने मदन भण्डारीको भनाइ व्यवहारवादकै उदाहरण हो । राजनीतिमा मुद्दाहरू हुन्छन् । मुद्दाहरूमा पक्ष र विपक्ष हुन्छन् । पक्ष र विपक्षको टकराव सधैं मित्रतापूर्ण मात्र हुँदैन । जहिलेसम्म मुद्दाहरू रहन्छन्, राजनीतिमा द्वन्द्व हुन्छ । टकराव हुन्छ । त्यसैले भण्डारीले जे भने त्यो सत्य होइन । बरु त्यो व्यवहारवादी भनाइ हो । उपयोगवाद सधैं व्यावहारिकताको दुहाई दिन्छ । त्यही सूत्रले आज नेपाली राजनीतिका मुख्य मुद्दाहरू कचेल्टिएका छन् । राजनीतिक धारहरू भुत्ते छन् र सबै पार्टीहरू उस्तै–उस्तै लाग्छन् । त्यसैकारण मान्छेहरू बाध्य भएर भन्छन्— जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।
गतिलो राजनीतिको अपेक्षा गर्नेहरू उपयोगवाद र व्यवहारवादलाई काम नलाग्ने विचार ठान्छन् । ‘माछा देख्दा दुलोभित्र हात र सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात’ यो उपयोगवाद हो । व्यवहारवाद हो ।
उपयोगवादी राजनीतिमा सिद्धान्तले व्यवहारलाई निर्देशित गर्दैन । बरु व्यवहारले सिद्धान्तलाई डोर्‍याउँछ । यस्तो राजनीतिमा लोकतन्त्र, समाजवाद, सुशासन, विकास, समृद्धि, समावेशीकरण राजनीतिक अडान बन्दैन । खतरनाक कुरा यो छ कि जव व्यवहारले सिद्धान्तलाई निर्देशित गर्छ, राजनीतिमा छलछाम सुरु हुन्छ । बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ सकिन्छ र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ । निकृष्ट जोड–घटाउ सुरु हुन्छ । पार्टीगत हिसाबकिताब थालिन्छ । यसले नेता कम र राजनीतिमा दलालहरू ज्यादा उत्पादन गर्छ । जस्तो कि दलाल पुँजीवादको चरित्र छ । बजारवाद यसरी राजनीतिमा प्रभावी बन्छ कि ‘उपयोग’ राजनीतिको शैली र प्रवृत्ति बन्न पुग्छ ।
कुनै एक दिन मेरा एक जना कांग्रेसी मित्रले निकै रमाइला प्रश्नहरू गरे । उनी सोध्छन्— नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा र प्रदीप गिरि को योग्य र क्षमतावान ? निश्चय नै उनीहरूको आ–आफ्नै विशिष्टता होला । यद्यपि प्रदीप गिरिको बौद्धिकता दुनियालाई थाहा छ । उनले अर्को प्रश्न गरे, उनीहरूमध्ये को सफल ? निश्चय नै देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर सफल हुनु र योग्य हुनु आफैंमा निकै फरक कुरा हो । त्यसो त काठमाडौंको स्थानीय निर्वाचनमा निकै रोचक परिचर्चा सुनियो । कतिपय मान्छेहरू भन्थे किशोर थापा र पवित्रमान बज्राचार्य सबभन्दा सक्षम उम्मेदवार हुन् । तर जिते अरूले नै । कसरी यस्तो भयो ? यस्ता प्रश्नमा उपयोगवादी राजनीतिले कुनै बहस गर्दैन । ऊ प्रचारमा विश्वास गर्छ । प्रोपोगन्डामा विश्वास गर्छ ।
जसले धेरैलाई ‘उपयोग’ गर्‍यो उही सफल । जसले धेरै नाफा गर्‍यो उही महान् । सत्ता राजनीतिको शीर्ष आसनमा जो पुग्यो, उही योग्य । ऊ नै सबभन्दा असल । यस्तो किन हुन्छ ? किनभने बजारमा योग्यता र गुणको भन्दा नाफाको कुरा ज्यादा हुन्छ । आजको नेपाली राजनीतिमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीहरू सबभन्दा ठूला नाफाका व्यापारीहरू हुन् । यसर्थ कि उनीहरू सबभन्दा धेरै ‘उपयोगवादी’ छन् । त्यसैले उनीहरू ‘बजारवादीहरू’ हुन् ।
बजारवाद नेपाली राजनीतिको प्रेरणास्रोत बन्नु अध्याँरोतिरको यात्रा हो । नेपाली राजनीतिलाई उज्यालोतिर लैजान सुसंस्कृत राजनीति, निष्ठावान नेता र गहिरो लोकतन्त्रको अभ्यासतिर जानुपर्छ । यसका लागि राजनीतिमा आस्था, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको पुन:स्थापना गर्नैपर्छ । राजनीतिले नाफा खोज्ने र बजारले राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको उत्थान गर्दैन ।
राजनीति राजनीतिजस्तै हुनुपर्छ । लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तै हुनुपर्छ । बजार बजारजस्तै हुनुपर्छ । अन्यथा राजनीति भद्दा र अर्थहीन हुनजान्छ । भद्दा राजनीतिले सत्ताको सिंहासन त देख्छ, तर दूर क्षितिजमा चम्किने समृद्धिको उज्यालो देख्दैन । त्यसैले नेताज्यूहरू भुइँमा कुद्ने र लोकतन्त्रको जरा काट्ने मुसा प्रवृत्ति छोडौं । बरु आकाशमा उड्ने र पर क्षितिजसम्म देख्ने चिल बनौं । नेपाली राजनीतिमा दूरद्रष्टाहरूको खाँचो छ ।